ပူပန်မှု ရှိသော်လည်း အိန္ဒိယရှိ မြန်မာ ရဟန်းတော်များ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသော လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက် သည့် ကောလာဟလ သတင်းများကြောင့် ဗုဒ္ဓဂါယာနှင့် ဗာရာဏသီမြို့များရှိ မြန်မာ စာသင်သား ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့် အနည်းငယ် စိတ်ပူပန်ခဲ့သော်လည်း အေးချမ်းစွာပင် စာပေသင်ကြား လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ အာသံပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား များနှင့် မူဆလင် ဘာသာဝင်များအကြား အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် တင်းမာနေမှု သတင်းများကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော
At 8/22/2012 11:42:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထပ်မံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တို့ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပို င်း က နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ တွေ့ဆုံမှု့ နှင့် ပတ်သတ်၍ ၂ ဖက်စလုံးက ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးလည်း ယခုတလော ဖြစ်ပွားနေသော ဖွဲ့စည်းပုံ ခုံရုံး ကိစ္စနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း ပြည်သူများက ယူဆနေကြပါသည်။
At 8/22/2012 11:28:00 PM No comments:
စွပ်စွဲပြစ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ပြန်စဉ်းစားကြပါဦး (မောင်ဝံသ)
အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကို စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မယ့်ကိစ္စစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က လွှတ်တော်ဥပဒေတွေကို အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှု တစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်း မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လှမ်းပြောတယ်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က လွှတ်တော်ဥပဒေတွေကို အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် လွှတ်တော်က နာခံခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ကိစ္စက နိုင်ငံရဲ့ institution များအတွက် အတော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်လို့ မိတ်ဆွေက ပြောတော့ အစစ်ပေါ့ဗျာလို့ ပြောမိတယ်။
At 8/22/2012 11:07:00 PM No comments:
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံးအနေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ် ဆိုတဲ့သတင်းကြားရေ တာ့ တော် တော်လေး စိတ်ဝင်စား မိပါတယ်။ တရားရုံးတွေနဲ့ ခုံးရုံးတွေဆိုတာ သာမန် အားဖြင့်တော့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်လေ့မရှိသလို၊ မီဒီယာ တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခုလို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပြီး တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာက စိတ်ဝင် စားစရာပါပဲ။ ကျမ အနေနဲ့ သတင်းယူ မယ်ဆိုတာကို တကယ်ပဲ စိတ်ပါ လက်ပါ ပြောမိပါတယ်။
At 8/22/2012 11:06:00 PM No comments:
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ဒီမို/ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ သဘောထားထုတ်ပြန်
အမျိုး သား လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် တို့က တစ် ဖက် နိုင်ငံတ်ာသမ္မတ ကိုယ်စား နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ်က တစ်ဖက် အငြင်း ပွားနေသည့် ““လွှတ်တော် အသီး သီးက ဖွဲ့စည်း ထားသည့် ကော်မတီ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့ တို့အား ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့ အစည်း အဖြစ် ထည့်သွင်း အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ် ခြင်းရှိမရှိ…”” အငြင်း ပွားမှု တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံး ၏ (၂၈-၃-၂၀၁၂)ရက်နေ့က
At 8/22/2012 10:20:00 PM No comments:
ရှောင်ရှားရမည့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း (ကိုဝ)
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ၂၀၁၂ခုနစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ရက် မတိုင်မီ ဆန္ဒအလျောက်နုတ်ထွက်မပေးဘူးဆိုရင် စွပ်စွဲပြစ်တင်ရလ်ိမ့်မယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သြဂုတ်လ ၁၄ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့စိုးရိမ်သွားမိပါတယ်။ပြည်သူ့လွှ တ်တော်အမတ် ၃၀၁ဦးကလွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကတစ်ဆင့် တင်ပြချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ ပြဿနာရဲ့အခြေခံက ၂၀၁၂ခုနစ် မတ်လ
At 8/22/2012 10:15:00 PM 1 comment:
ဗိုလ်ချုပ်ထဲက တို့ ဗိုလ်ချုပ် (သို့) လာရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အတွက် ဂုဏ်ပြုသီချင်း(mp3)
လာရှိုးသိန်းအောင် သီဆိုထားသော သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အတွက် ဂုဏ်ပြုသီချင်း ကိုYoutube မှာ တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ mp3 format နဲ့ Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် ကျွန်တော် mp3 format ပြောင်းထားပါတယ်။ အောက်က လင့် မှာ ဒေါင်းပါ။ Download မရရင် Email နဲ့ ပို့ပေးပါမယ်၊ Comment မှာ ရေးခဲ့ပါ။
At 8/22/2012 09:53:00 PM No comments:
ဦးသိန်းစိန်ကြီးကို လားရှိုးသိန်းအောင် ဂုဏ်ပြု
♫♫ ♪ ဗိုလ်ချုပ်ထဲက တို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ဂုဏ်ယူ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖို့ ... ♫ ♪♫
အမေရိကန်ရောက် အဆိုတော်ကြီး လားရှိုးသိန်းအောင်က သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း သီချင်းတပုဒ် စပ်ဆိုပြီး အဲဒီသီချင်းကို အွန်လိုင်းမှာ ဖြန့်ဝေနေပါပြီ။သူ့ရဲ့ နာမည် နောက်တမျိုးက ဂျင်မီဂျက် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့စတီဒီယိုလောကခေတ်ဦး အဆိုတော် လားရှိုးသိန်းအောင်ဟာ အသက် ၆၆ နှစ် ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။
At 8/22/2012 09:18:00 PM 1 comment:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တောင်သူလယ်သမားများအရေးအား လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပေးနိုင်မည့် ‘တောင်သူ လယ်သမားရေးရာ ဗဟို လုပ်ငန်းကော်မတီ’ ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း က ပြောသည်။သီးနှံ များ ရောင်းချရန် ခိုင်မာသော ဈေးများ ရှိရေး၊ အတိုး သက်သာသော ချေးငွေ ရရှိရေး၊ အတိုးမဲ့ နှစ်ရှ ည်ချေးငွေများ ရရှိရေး၊ အရည်သွေးမီသော ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် နည်းပညာ၊ စက်ကိရိယာများ ရရေး၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိသင့်သိထိုက်သော သတင်းအချ က်အလက်များ ရရှိရေး၊ လယ်မြေသုံး
At 8/22/2012 09:13:00 PM No comments:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသ စ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြေကြာင်း အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ် င န်း ရှင်များက သြဂုတ်လ တတိယအပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ် ပြောကြား သွားသည်။“နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်ကြ ည့်နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒါက ကျနော်တို့ အတွက်လည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့လည်း ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ
At 8/22/2012 09:10:00 PM No comments:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် လွှတ်တော်ကို ယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရုတ်သိမ်းပေးရန် ပြည်ထော င်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော် မရှင်သို့ သောကြာနေ့တွင် တင်ပြသွားမည်ဟု အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်သူ ဦးမင်းအောင်က ပြောသည်။ထိုသို့ ကန့်ကွက်စာ တင်ရန်အတွက် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့က စတင်သော သဘောထား လက်မှတ်ကော က်ယူ မှုတွင်ေ တာင် ဥက္က လာ မဲဆန္ဒရှင် ၁,၃ဝဝ က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်သည်။
At 8/22/2012 09:06:00 PM No comments:
မွန်ပြည်နယ်ရှိ တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူမြို့နယ် အတွင်း မြို့နယ်တ ချို့နှင့် ဖြစ်ပွားနေသည့် မြေယာ သိမ်းဆည်းမှု ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မွန်နိုင်ငံရေး ပါတီတို့က အကောင် အထည်ဖော် ဆောင် ရွက် တော့မည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိ ကျိုက်မရော မြို့နယ်အတွင်း ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီမှ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ေ ဆာက်ရန် အတွက် ဒေသခံတို့၏ လယ်ယာ ခြံမြေများကို လျော်ကြေးအနည်းငယ်သာပေးပြီး သိမ်းဆည်းနေ မှုနှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း ရေတပ် တည်ဆောက်ရန် မြေသိမ်းဆည်း မည့်ကိစ္စတို့ကို ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး
At 8/22/2012 09:02:00 PM No comments:
လွှတ်တော်အသီးသီးရှိ ဆွေးနွေးမှုများကို ပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် နိုင်ငံပို င် ရုပ်သံဖြစ်သော မြန်မာ ရုပ်မြင်သံကြားက ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ အထိ ထုတ်လွှင့် ပေးနိုင်ဦးမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။ ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ပြည်ထောင်
At 8/22/2012 08:18:00 PM No comments:
လူဦးရေ ခြောက်သန်းခန့် နေထိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ရယ်မောခြင်းကို နှစ်သက်သူများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လူရွှင်တော်ည( STAND – UP COMEDIAN ) အစီစဉ်ကို သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း Home ( House of Media & Entertainment ) ၏ တာဝန် ရှိသူ ဦးဇော်သက်ထွေးက ပြောကြားသည်။
At 8/22/2012 08:12:00 PM No comments:
တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲတွင် လူထုဘ၀ အာမခံချက်ကိုသာ KNU အဓိကထား ဆွေးနွေးမည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ)က မြန်မာအစိုးရနှင့် မကြာမီ တွေ့ဆုံမည့် တတိယအကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကရင်ပြည် သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်နှင့် ဘ၀လုံခြုံမှု အာမခံချက်ရရှိရေးကိုသာ အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ကေအဲန်ယူဘက်က ပြော သည်။
လာမည့် သြဂုတ်လ ၂၇ရက်မှ ၂၉ရက်နေ့အထိ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့တွင် နှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံကြမည် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲတွင် သဘောတူညီထားသည့် အချက်အလက်များကို
At 8/22/2012 07:08:00 PM No comments:
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း ယုဇန ကုမ္ပဏီမှ သိမ်းယူထားသော မြေနေရာပေါ်ရှိ ကိုင်းတောမှော် ၂ မှ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ အလွန်များပြားလျက် ရှိလာသည်ဟု ဒေသခံများနှင့် ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့ KDNG မှ ပြောသည်။
At 8/22/2012 06:43:00 PM No comments:
At 8/22/2012 06:40:00 PM No comments:
At 8/22/2012 06:35:00 PM No comments:
At 8/22/2012 06:32:00 PM No comments:
အခြေခံဥပဒေခုံရုံး အရှုပ်တော်ပုံဟာ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့နဲ့ ဦးရွှေမန်း ဦးစီးတဲ့ လွှတ်တော်ကြား အားပြိုင်တဲ့ ပွဲလား (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)လွှတ်တော် အသီးသီးမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရေးရာ ကော်မတီတွေ၊ကော်မရှင်ေ တွ ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် သတ်မှတ် မပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ အဖွဲ့ဝင်ေ တွကို အမျိုးသားလွှတ်တော် က စွပ်စွဲပြ စ်တင်မှု ပြုလုပ်တော့ မယ် လို့ သိရပါတယ်။
At 8/22/2012 06:22:00 PM No comments:
ElevenMediaGroup က တပတ်ကို သတင်း၊ အားကစား ဂျာနယ် စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်ထုတ်လဲ သိလား
Myanmar media is not totally free yet despite the government's announcement on Monday that it was lifting censorship on all publications--including those covering controversial topics like politics and religion, said one of the country's top media executives."There are just changes in procedure but the rules are still there," said Than Htut Aung, chairman and CEO of Eleven Media Group, in an interview with Asia News Network on Tuesday. By rules, he was referring to the 1962 Press Act that, among others, imposesamaximum seven-year jail term for journalists who violate it.
At 8/22/2012 06:11:00 PM 1 comment:
(နိဒါန်း) မှောင်အတိ စိုးမိုးထားသော ညဉ့်၏နက်ရှိုင်းမှု ပျယ်လွင့်တော့ မည့် အရိပ်အယောင်ကို မတွေ့ရသေးသော်လည်း ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း အသင့် အနေအထားရှိနေသည့် စစ်သင်္ဘော တစ်စင်းသည် အချိန်တစ်ခု ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ နာရီလက်တံများ တရွေ့ရွေ့ လှုပ်ရှားနေကြ သည်။ အေးမြသော ဆောင်းလေ အဝှေ့တွင် စစ်သင်္ဘောမှ အလံတိုင် ပေါ်ထက်ဝယ် ယူနီယံဂျက် အလံသည် တဖျတ်ဖျတ် လွင့်နေသည်။ ဘာမင်ဟမ် စစ်သင်္ဘော အနီးရှိ ဘင်ခရာ တပ်ဖွဲ့သည် အဆင်သင့် အနေအထားဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ အရုဏ်သည်
At 8/22/2012 06:04:00 PM No comments:
ကျူချောင် သင်္ချိုင်းဝင်း အတွင်ြးေ မပုံမို့မို့နှင့် ရေညှိတ က်မည်းညစ် နေသော အုတ်ဂူများ ကို ကွေ့ကာ ရှောင် ကာ လျှောက်ရသည်။ တာလမ်းပေါ် အဝေးမှပင် လှမ်းမြင်ခဲ့ ရသော်လည်း ယခု လက် တစ်ကမ်း မျက်စိရှေ့တွင်တော့ ပလတ် စတစ်အိတ်များ၊ အညစ်အကြေးများ၊ စွန့်ပစ်ပ စ္စည်းအစုတ် အပြတ်များစွာဖြင့် အမှိုက် ပင်လယ်ကြီးတစ်ခု။ ထောင်း ခနဲ လွင့်တက်လာသော အနံ့ဆိုးများ ကြောင့် အသက် ကိုခိုးရှူ ရင်း ပတ်ဝန်း
At 8/22/2012 05:58:00 PM No comments:
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးမှုဟာ အရေး တစ်ကြီး ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာနေပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ပါမောက္ခ အီကီဒါကတော့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် တီထွင်ကြံ ဆမှုဖြစ်တဲ့ လူ့မစ င်ကနေ ပရိုတိန်းဓါတ်ပါတဲ့ အသားတုတစ်မျိုးကို တီထွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်
း ဟာ ဒီအခက်အခဲပြဿနာကြီးကို အရေး ပါတဲ့ နေရာကနေ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆ နေခဲ့ ပါ တယ် ။
At 8/22/2012 05:52:00 PM No comments:
Labels: လူမှုဘ၀ရသစုံလင်, နိုင်ငံတကာသတင်း
ရေးသားသူ- အခွေရောင်းသူတစ်ဦး ကျွန်တော်တို့သည် လမ်းဘေးတွင် ဒီဗီဒီအခွေရောင်းချပြီး မိသားစုရပ်တည်ရေးအတွက် ၀င်ငွေရှာနေ ရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဒီဗီဒီအခွေများ (တရားခွေ၊ နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းများ-အင်္ဂလိပ်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ ကာတွန်း) ရောင်းချပြီး ၀မ်းရေးဖြေရှင်းနေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ အခွေရောင်းချရာတွင် မည်သည့်အချိန် အဖမ်းခံရမည်ကို စိုးရွံ့ထိတ်လန့်စွာဖြင့် ရောင်းချ ရပ်တည်နေရပါသည်။ ယခုလို အင်တာနက်ခေတ်ထဲတွင် နိုင်ငံခြားကား ရောင်းချခြင်း၊ အများပြည်သူ
At 8/22/2012 05:45:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရေလွှမ်းမိုးခံနေရသည့် ဒေသများသို့ သွားရောက် အားပေးမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ရေလွှမ်းမိုးမှု ဒဏ်အဆိုးရွား ဆုံး ခံနေ ရသော ဧရာဝတီ တိုင်းေ ဒသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှ အချို့ေ နရာများကိုယ ခုရက်ပိုင်း အတွင်းသွားရောက် မည်ဖြစ်ကြာင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ သိရသည်။
At 8/22/2012 05:42:00 PM No comments:
At 8/22/2012 05:15:00 PM No comments:
ဗုဒ္ဓရုပ်ထု အနမ်းချွေတဲ့ ပြင်သစ် မိန်းခလေး ထောင် (၆)လ ချမှတ်ခံရ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို အားလပ်ရက် အတွင်း လာရောက် လည်ပတ်တဲ့ ပြင်သစ် မိန်းခလေး တစ်ဦးဟာ ဗုဒ္ဓရုပ်ထုကို အနမ်းချွေတဲ့ အတွက် တခြား သူ့အဖေါ် နှစ်ဦးနဲ့ အတူ ဆိုင်ငံ့ ပြစ်ဒဏ် (၆) လ ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့က သူတို့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့ အခါ ဆိုင်းငံ့ ထောင် (၆) အပါအ၀င် ရူပီ ၁၅၀၀ စီ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားလပ်ရက် ဓါတ်ပုံတွေအထဲမှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက နုတ်ခမ်းနဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ထုကို အနမ်းချွေနေ တာကို တွေ့ရှိ ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ခုလို ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
At 8/22/2012 04:17:00 PM2comments:
အမွေကိစ္စဖြင့် မယားညီအစ်ကိုနှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဓားဖြင့် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် အပြန်အလှန် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်က ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေသူ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ ကိုညီညီထွန်း ၎င်း၏ဇနီး မ...တို့နှင့် မယားညီအစ်ကိုတော်သူ အသက် ၄၁ နှစ်ရှိ ကိုဝင်းဇင်သည် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၉ ရပ်ကွက် မဟာမြိုင်လမ်းဘေးတွင် စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ဓားကိုယ်စီဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
At 8/22/2012 04:03:00 PM No comments:
"HIV ပိုးရှိသူ မိဘမဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသူနှစ်ဦး ဝိုင်းကျူရှင်မှ ထုတ်ပယ်ခံရ"
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပေါ့စတစ်(HIV Positive) ၁ဝ တန်းကျောင်းသူနှစ်ဦးအား ဝိုင်းကျူရှင်ဆရာမကကျူရှင်လာရောက်မတက် ရန် ပြောကြား ခဲ့ကြောင်းNational NGOs Network မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ''HIV Positive ဖြစ်နေ တဲ့ ကျောင်းသူနှစ်ဦးကို သူတို့ ဝိုင်းကျူ ရှင်ဆရာမက လာမတက်ဖို့ ပြော ခဲ့တယ်။ သူတို့က မိဘမဲ့တွေလည်း ဖြစ်တယ်။ အမှန်တော့ ဒါဟာ ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ၊ ကာကွယ် ရေးအစီ အစဉ်တွေ ပေးနေတယ် ဆိုပေမယ့်လည်းအားနည်းနေသေး တယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်'' ဟု National NGOs Network မှ ကိုစိုးမိုး အောင်က ပြောသည်။
At 8/22/2012 04:00:00 PM No comments:
မြန်မာပြည်က ဆင်ဆာ ဖျက်သိမ်းတဲ့သတင်းဟာ တရုတ်ပြည် မီဒီယာတွေမှာ ထောင့်ပေါ င်းစုံနဲ့ တင်ပြရေး သားနေကြပြီး အွန်လို င်းဖိုရမ် တချို့မှာဆို တရုတ်ပြည်ကရော မြန်မာလို လိုက်မလုပ် သင့်ဘူးလားလို့ မေးခွန်းတွေတောင် ထုတ်လာကြပါတယ် ။မြန်မာ့ဆင် ဆာ သတင်းအပေါ် တရုတ်တွေရဲ့ ချဉ်း ကပ်ပုံ မတူခြားနားကြတာ တရုတ် အစိုးရရဲ့ သတင်းဌာန အတွင်းမှာကိုပဲ ကွဲနေကြပါတယ်။တရုတ်အမျိုး သားရေးဝါဒယိမ်း သတင်းစာ
At 8/22/2012 03:48:00 PM No comments:
မန်း သူနာပြုတက္ကသိုလ်အနီးယာဉ်တိုက်မှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ၏ ပြောပြချက်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ယဉ်မောင်းလိုင်စင် လုပ်ပေးတယ် ။ ကျနော်လ ည်း ကျောင်းသားရေးရာမှာ စာရင်းသွားပေးတယ် ။အင်တာ နက် ဆိုင်သွားဦးမှ ဆိုပြီး ကျောင်းက ပြန် လာတော့ ကျောင်းရှေ့လမ်း (62လမ်း) သူနာပြုကျောင်းနားလေးမှာဘက် ယဉ်တိုက် မှုဖြ စ်နေတယ် ။ လူတွေ အုံနေတာပဲ ။ ကျနော်ဆိုင်ကယ်စီးလာရင်း ကြည့်လိုက်တော့ ပြိုင်ကားအနက်လေး ။ခေါင်းပိုင်းတစ်ခုလုံး ကြေမွလို့ ။ ရင်ထဲမှာ ထိတ်ကနဲ့ ဖြစ်သွားတယ် ။ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ကားပိုင်ရှင် ကျနော့်သူငယ်ချင်းကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ပြိုင်ကားအနက်လှလှလေးထဲမှာ
At 8/22/2012 03:23:00 PM No comments:
မန်း သူနာပြုတက္ကသိုလ်အနီးယာဉ်တိုက်မှုဖြစ် (ဓါတ်ပုံ)
At 8/22/2012 03:14:00 PM No comments:
နော်ဝေးနိုင်ငံမွတ်စလင်တွေ သီးခြားနို င်ငံသတ် မှတ်ေ ပးဖိုတောင်းဆို
နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေဆိုက် အစ္စလာမ္မစ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အန်ဆာ-အယ်-ဆွ န်နား အဖွဲ့ က သူတို့လို ပြည်တွင်းနေ မုတ်စ်လင်ေ တွအနေဖြင့် ရှားရီးယား ဥပဒေနဲ့ အညီ လွတ်လပ်စွာနေ ထိုင်နိုင်ရန် အတွက် မြို့တော် အော် စလို ကို အပိုင်းခွဲပြီး သူတို့အတွက် သီးခြားနို င်ငံသတ် မှတ်ေ ပးဖို့နဲ့ မလိုက်လျှောပါက အမေရိကန်နိုင် ငံမှာလူပေါင်း သုံးထောင်နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ နိုင်းအီ လဲဗင်း အကြမ်းဖ က်မှု လိုမျိုးနော်ဝေးနိုင်ငံကို လက်စားချေတိုက်ခို က် သွားမ ယ် လို့ နော်ဝေ
At 8/22/2012 03:02:00 PM No comments:
မန္တလေးမြို့သစ် တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းအတွက် CB ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးက ဦးဆောင်ပြီး အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းကာ အကြိုပြင်ဆင်နေ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေဧက ၂၀၀၀၀ ကျော်ပေါ်တွင် မြို့သစ်တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းအတွက် CB ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးကဦးဆောင်ပြီး မြို့တော်သစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် အကြို ပြင်ဆင်ေ နေ ကြာင်း သတင်းရရှိသည်။
At 8/22/2012 02:48:00 PM No comments:
ဂျာမနီအခြေစိုက် ဗောက်စ်ဝဂွန် မြန်မာဈေးကွက်သို့ ၀င်ရောက်ရန် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ရှာဖွေနေ
ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး ကားကုမ္ပဏီ ဗောက်စ်ဝဂွန် (Volkswagen) မြန်မာပြည်ေ ဈးကွက်သို့ ၀င်ရောက်ရန် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ရှာဖွေနေကြောင်း ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလု ပ်ငန်းရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ သတင်းရရှိသည်။''တရားဝင် အရောင်းကိုယ် စားလှယ်ပေးဖို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တချို့နဲ့ ဆက်သွယ်နေတယ်။ကားအရောင်းစင်တာ ဖွင့်ထားတဲ့ မြန်မာထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတာပါ''ဟု လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။
At 8/22/2012 02:46:00 PM No comments:
ဟွန်ဒိုင်းနှင့် ကီရာကားကုမ္ပဏီတို့၏ မြန်မာပြည်အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်ရယူရန် ဒိုင်းမွန်းစတားကုမ္ပဏီ ဆွေးနွေးနေ
တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့အဆင့် ကားကုမ္ပဏီများဖြစ် သည့် ဟွန်ဒိုင်း (HYUNDAI)နှင့် ကီရာ(KIA) ကုမ္ပဏီတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒိုင်းမွန်းစတားကုမ္ပဏီမှ ရယူရန် ဆွေးနွေးနေကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပ ဏီနှင့် နီးစပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။''တရားဝင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ရယူနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတာ၊ ကားသစ်တွေကို အဓိကတင်သွင်းရောင်းချမယ်လို့ သိရတယ်''ဟု ဒိုင်းမွန်းစ တားကုမ္ပဏီနှင့်နီးစပ်သည့် လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။ ဒိုင်းမွန်းစတားကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းဖြန့်ချိ ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် Capital Automotive လုပ်ငန်းကို
At 8/22/2012 02:45:00 PM No comments:
At 8/22/2012 02:28:00 PM No comments:
"ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကန်ဒေါ်လာသန်း ၈ဝ အကုန်အကျခံ၍ စံပြကျေးရွာများ ထူထောင်ပေးမည်"
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့်မြန်မာပြည်တစ်ဝန်း စံပြကျေးရွာများ ထူထောင် သွားမည်ဟု အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ ဘဏ်မှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈ဝ အကူအညီပေးရန် အကြိုညှိနှိုင်း သဘောတူညီချက် ရရှိထားပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆက်လက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသွားမည်ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
At 8/22/2012 02:24:00 PM No comments:
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွား ထုတ်ဖော်ရေး အဆိုသည် လွှတ်တော်တွင် အရေးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ တရားသူကြီးချုပ်များနှင့် အစိုးရ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ လျှို့ဝှက် ချိတ်ပိတ် တင်ပြရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 8/22/2012 01:45:00 PM No comments:
ဧရာဝတီတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ၂ ခုအား ၂ လအတွင်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဧရာဝတီ တိုင်းလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးက သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က အတည်ပြု ဆုံးဖြ တ်ခဲ့ သည်။ ပုသိမ်မြို့ ဧရာမင်း ဈေးပိုင် စည်ပင်မြေကွက်အား ဌာနဆိုင် ရာများက အိမ်ခြံမြေ အကွက်ဖော် ရောင်းစားခဲ့မှုနှင့် ပုသိမ် မြို့နယ် သစ်ပုတ်ကုန်းကျေးရွာ ဘောလုံးကွင်းအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများက ရောင်းစားခဲ့သည့် အမှု ၂ ခုကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် တိုင်းလွှတ်တော်က တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်-၂၁ပြည်တွင်းအခပေး ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော စကိုင်းနက် (SkyNet)က ယခုနှစ်အတွက် ပရီးမီး ယားလိဂ် ဘောလုံး ပွဲစဉ်များကို ပြသနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းယင်းရုပ်သံလိုင်း၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ယမန်နှစ်က စကိုင်းနက် ရုပ်သံလိုင်းများတွင် ပြသနိုင်ခဲ့သည့် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များကို ယခုနှစ်ရာသီတွင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏
At 8/22/2012 12:58:00 PM2comments:
ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော် မြစ်ကြီးနား အနီး တောင်ဘက် ဟူးကပ်ကျေး ရွာရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO မှ အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိ ၁ ဦးနှင့် စစ်ဘက် ဗိုလ်ကြီး ၁ဦးကို မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ ဇူလိုင် ၁၆၊ တနင်္လာနေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြော င်းသိရှိရသ ည်။ ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ KIA တပ်ရင်း (၅)နယ်မြေမှ မိုးကောင်းတိုက်နယ်ခွဲ ဒု-အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ဂွမ်ဘားစင်ရောင်နှင့် ဗိုလ်ကြီး ဒဘန်ခွန်းဆိုင်း တို့နှစ်ဦးကို ဟူးကပ်ကျေးရွာတွင်း သွားလာနေချိန် မြန်မာအစိုးရတပ် ခလရ (၃၇) မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA အရာရှိတဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
At 8/22/2012 12:52:00 PM No comments:
"ရေကြီးရေလျှံ အဖျက်ခံရသော လယ်မြေများအရေး သဘာဝဘေးရန်ပုံငွေမှ သမ္မတ သုံးစွဲခွင့်ပြု"
ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည့် လယ်ယြာေ မများ ပြန်လည် စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် သမ္မတက သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ရန်ပုံငွေထဲမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ခရိုင် ၆ ခု အနက် ၅ ခု ရေ လွှမ်းမိုးမှုဒဏ် ခံခဲ့ရပြီး စိုက်ဧက သုံး သိန်း နီးပါးခန့် ရေနစ်ခြင်းခံခဲ့ရ သော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွက် လိုအပ်သော မျိုးစပါးများ
At 8/22/2012 12:37:00 PM No comments:
At 8/22/2012 12:25:00 PM No comments:
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံမည်ကြီး ကုမ္ပဏီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ မစ်ဆုဘိရှီ ( Mitsubishi) ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးဟာ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်မှာ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ရုံးခန်းသစ် တခု တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ သဘာဝ အရင်းအမြ စ်တွေ ပေါကြွ ယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ အခြား အာဆီ ယံ နိုင်ငံတွေနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေပြီး ပထ၀ီ သဘောအရ အားသာချက်တွေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ် ပါတယ်။ လူဦးရေက လည်း ၆၂ သန်းလောက်ရှိပြီး နောက်ထပ် စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားလားကောင်း
At 8/22/2012 12:02:00 PM No comments:
At 8/22/2012 11:34:00 AM No comments:
At 8/22/2012 11:09:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ် အ စိတ် အ ပို င်း အဖြစ် မကြာသေး မီက စာပေ စိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖျက်သိမ်း လိုက်ခြင်းနှ င့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ် အစိုးရ အာဘော် ဂလိုဘယ်လ်တိုင်းမ် သတင်းစာက တရုတ်တို့ အနေဖြင့် ယင်းကို စံနမူနာ မတင်သင့်ဘဲ ကိုယ့်မူ ကိုယ့်ဟန်နှင့်သာ စာပေ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ရယူသင့်ကြောင်း ဝေဖ န်ေ ရး သား လိုက်သည်။
At 8/22/2012 10:46:00 AM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအတွင်း များမကြာမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘင်္ဂလီ-ရခိုင် အဓိကရုဏ်းတွင် ဘင်္ဂလီများက ရခိုင်ပြည် ဒေသအတွင်းဝင်ရောက်၍ ကျူးကျော် စစ်ဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင် ၏ သဘောထားအမြင်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ရခိုင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း စာမျက်နှာမှ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
At 8/22/2012 10:43:00 AM No comments:
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိ ဗိမာန်ခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchellအား လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အတူ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဒုတိယ
At 8/22/2012 10:22:00 AM No comments:
TTC ကျောင်းမှ ဆရာမနှစ်ဦးကို ပြောင်းရွှေ့သဖြင့် သမ္မတထံ တိုင်ကြားမည်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကမာရွတ် ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေး အထက်တန်းကျောင်း TTC မှ ဝါရင့် ကျောင်းဆရာမ နှစ်ဦးအား ကျောင်းပြောင်းလိုက်သည့်အပေါ် မကျေနပ်သော တပည့်များက သမ္မတထံ စာရေးတိုင်ကြားရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသည့် ကျောင်းသားများက ပြောသည်။
TTC တွင် လုပ်သက် နှစ် ၂၀ ကျော် အသီးသီး ရှိကြသည့် ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်သင်ြ ကား သူ ဒေါ်အေးေ အး သိန်း ကို ကျောက်တန်းမြို့နယ်ရှိ မြိုင်သာယာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်
At 8/22/2012 10:15:00 AM No comments:
(၁၀) လကြာ တည်ဆောက် နေသည့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၏ အဓိက ထွက်ပေါက်ဖြစ်သော ငမိုးရိပ် တံတားသစ်ကို သြဂုတ်လကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေး တာဝန်ခံ တစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။ယင်းတံတား တည်ဆောက်မှုမှာ ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး ပြီးစီးနေပြီး တံတားနှင့် ချဉ်းကပ် လမ်းများတွင် နိုင်လွန် ကတ္တရာခင်းရန် အဆင့်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
At 8/22/2012 10:09:00 AM No comments:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေသော ဂျပန် ဘောလုံးသမား နာကာတာ ကမြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး အသင်းအနေဖြင့် ဘောလုံး မပါဘဲ လူရွှေ့လိုက်ပါနေရာယူရာတွင် အားနည်းနေသေးကြောင်း ပြောသွားသည်။သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ကတည်းက ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော အီတလီ စီးရီးအေနှင့် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် တုိ့တွင်ပါ ကစားခဲ့ဖူးသော အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင်း နာကာတာ သည် တနင်္လာနေ့က လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ရန်ကုန်
At 8/22/2012 08:47:00 AM No comments:
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆင်ဘိုမြို့နယ်အတွင်း ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှ တဆင့် ကြွက်အုပ်များ ညအချိန်တွင် အများအပြား ဝင်ရောက်လာကာ ပြောင်းခင်းများအား ဖျက်ဆီးနေကြောင်း ဒေသခံ များ အပြော အရ သိရသည်။ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲနှင့် မြင်သာ၊ ရေနားပင်လုံ ရွာများတွင် ကြွက်အုပ်များ သောင်းနှင့်ချီ၍ ဝင်ရောက်နေပြီး မှောင်ရီပျိုးချိန်မှ မနက်အလင်းရောင် မလာမီ အချိန်အတွင်း မြစ်အား ဖြတ်ကူးဝင်ရောက် နေကြောင်း ဆင်ဘိုမြို့နေ ကိုကြည်စိုး က ပြောသည်။
At 8/22/2012 08:45:00 AM No comments:
ဖူကူယားမားရဲ့ ဟောပြောပွဲများ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်မှာ လုပ်မည်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကမ္ဘာကျော် ‘သမိုင်းနိဂုံးချုပ်ပြီ’ ၏ မူရင်းစာအုပ် ‘The End of History and the Last Man’ စာအုပ်ရေးသားသူ ဒေါက်တာ ဖရန်စစ် ဖူကူယားမား Francis Fukuyama က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ဟောပြောရန်အတွက် မြန်မာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် လွတ်လပ်ဈေးကွက်ဘက်မှ ရပ်ခံသူ အသက် ၆၀ အရွယ် ဖူကူယားမားသည် လက်ရှိတွင် အမေရိကန် စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အခြေခံဥပဒေ နှင့်ဒီမိုကရေ စီရေးရာဌာနမှ Senior Fellow တဦး ဖြစ်ပြီး သည့်မတိုင်ခင်တွင် ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံ တကာ လေ့လာရေး
At 8/22/2012 08:44:00 AM No comments:
At 8/22/2012 08:43:00 AM No comments:
ရခိုင်ဒေသဖြစ်စဉ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းပြောဆိုရေးသားမှုများ ရပ်တန့်ကြဖို့ တိုက် တွန်းထားတဲ့ နိုင်ငံခြားေ ရးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဒီကနေ့ သတင်းစာများမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
"ရခိုင်ပြည်န ယ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များသည် အုပ်စုချင်း အပြန်အလှန် လက်တုံ့ပြန်အကြမ်းဖက်မှုများသာဖြစ်"
At 8/22/2012 08:34:00 AM No comments: